Otu esi emepụta gburugburu Plasma na usoro 8 | Site na Linux
Otu esi emepụta gburugburu Plasma na usoro 8
obi ike | | Ọdịdị / Nhazi, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Nke a bụ nsụgharị nke nkuzi iji mepụta isiokwu Plasma na usoro 8:
Detuo na nyegharịa faịlụ Plasma dị ugbu a. Aha faịlụ ahụ nwere ike ịbụ otu ihe ahụ. Isiokwu arụnyere nọ share / ngwa / desktọọpụ / ma obu na ndekọ .kde ma ọ bụ ndekọ nke nrụnye KDE gị. I nwekwara ike chọọ isiokwu Plasma na KDE-Lee. Dezie faịlụ ahụ metadata.desktop na ndeputa ihe omuma ahu dika aha aha ya di. Lee Nchekwa Okwu Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka.
Mepee SVG faịlụ jikọtara ya na Plasma element ị ga - achọ ịgbanwe na nchịkọta akụkọ SVG dịka Inkscape ma ọ bụ Karbon. Lee Isi Okwu Ugbu a Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka.
Faịlụ SVG ọ bụla nwere ike inwe ọtụtụ ihe. Gbanwee ihe dị ma ọ bụ mepụta ndị ọzọ. Ihe nwere ike ịbụ SVG oge ochie ma ọ bụ ihe otu. Cheta na: You nwere ike ịgụnye onyonyo bitmap dị ka ihe SVG ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndị editọ bitmap dịka GIMP ma ọ bụ Krita. Cheta imekota onyonyo ọ bụla (inkscape: effects-> images-> integrate all images).
Iji gbanwee aha nke isiokwu nke isiokwu ahụ n'ụzọ dị mfe ọ ga-ekwe omume iji ndọtị Inkscape dị na adreesị a
Gbaa mbọ hụ na ihe edobere maka ihe ọhụụ ọhụụ. Cheta na: Inkscape ị nwere ike ijide n'aka na NJ nke mmewere maka ihe ọ bụla ziri ezi site na ịpị aka na ihe na ịhọrọ Njirimara Ihe.
Tinye ma ọ bụ wepu ihe ọ bụla ịchọrọ. Ọ baghị uru ka o si dị, naanị ihe ndị ahụ nwere ihe ID ID na-emegharịrịrị ntụnye ntụnye kachasị mma dị ma ọ bụ na ọ bụghị. Lee iche maka nkowa nke ihe ndenye di.
Tinyegharịa usoro 3 - 6 maka isiokwu ọzọ.
Amaghim ma asughariri m ya nke oma, mee ka m mara ihe obula
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Otu esi emepụta gburugburu Plasma na usoro 8
Eziokwu na-adọrọ mmasị, ma na-ekele gị nwa, ị mechara dee ihe.
Ee nke ahụ bụ otu ị si kwụsị iberibe
Kwụsị iberibe gị? Oh mba na mgbe
Ọfọn ihe m na-efu
enwere ma ọ bụ enweghị obi? hehehe
Ka m ghara inweta ya
Ihe na - eme bụ na ebe a na Venezuela ha nwere mmemme mkpakọrịta nwoke na nwanyị na onye ọbịa ahụ jụrụ di na nwunye ahụ n’ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na ha ebikọ ọnụ ma ọ bụ
M na-ohere iji nwalee otú onye ọrụ gị n'ụlọnga anya dị ka m 😀 ahaha
ma enweghị m ike itinye ya na google chrome; ((fuck)
hahahahaha jiri Chromium, Iron, Opera, Rekonq, Firefox, ihe obula pere mpe… HAHA
AJAJAJAJAJAJA .. Kedụ ihe ọzọ .. M ga-ano chromium ..
KZKG ^ Gaara .. Ngwọta nye nsogbu 😉
Emeghere m nke ahụ, emee m sudo nautilus, meghee windo, agara m nke ọma site n'okporo ụzọ a / usr / share / applications / chromium, m wee pịa aka nri chromium, nye m ya na akụrụngwa mgbe ahụ, m nyere iwu, enwetara m / usr / bin / chromium% U .. M ehichapụ ya ma jiri aka dee nke a:
Emere m ya n'aka .. n'ihi na idetuo na ịdefe emetụtaghị mgbanwe ahụ, yabụ m ga-ede ya n'onwe m.
Gajim dị ka multiprotocol ahịa
Jiri igwe nyocha MFP nyocha